Feno mpivarotra ihany koa ny sisin-dalana, mifanaretsaka sy mitabataba ny olona…. Noho ny fahasahiranana no nambaran’ny mpivarotra iray nanaiky nitafa taminay fa anton’izany. Ny vola hita anio mantsy hoy izy no miantoka ny sakafo hanina rahampitso ka tsy mivoaka na dia eo aza ilay otrik’aretina coronavirus. Ny famindram-pon’Andriamanitra sisa raha fehezina no hianteheran’izy ireny fa ny ankoatra izay dia tsy misy. Tsy nihoatra ny 40 % rahateo raha nisy ireo malagasy afaka nanao « provision » nanomboka ny sabotsy teo fa fitsinjovana ilay aretina fa ny ankoatra izay dia mbola miankina amin’ny vola vao hotadiavina avokoa. Nomarihin’ireo mpivarotra hatrany moa fa tsy ny aretina no mety hahafaty azy ireo raha tsy maintsy terena io fijanonana any an-trano io fa ny hanohanana.